China Aluminium SOLID PANEL ifektri kanye nabaphakeli | I-Alucosun
Iphaneli ye-ALUMINUM SOLID
I-Alucosun SOLID® yi-Aluminium Solid efakwe ngaphambilini kumapaneli wezinhlamvu ezinkulu ze-aluminium ezinokuqina okuhlukahlukene kanye nezinketho zokulungela ezilungele kahle i-facade, uphahla, ukufaka ophahleni. Kuthathwa njengenye yezingubo ezihlala isikhathi eside kakhulu, eziphephile, ezomnotho nezinobungani obutholakalayo kulezi zinsuku.
I-Alucosun SOLID ® ihlukaniswa njenge-Class A1 Fire Resistant facade evivinywe i-EN13501 nokuqina kwayo kukhonjiswe kuzakhiwo zokumboza ze-PVDF ezinemibala ehlukahlukene futhi iqeda amasudi ezinhlobonhlobo zezicelo.
I-Alucosun SOLID®i-Aluminium Solid ipendwe ngaphambilini kumapaneli wezinhlamvu ezinkulu ze-aluminium ezinokuhlukahluka okuhlukahlukene nokukhetha okulungele kahle i-façade, uphahla, ukufaka uphahla. Kuthathwa njengenye yezingubo ezihlala isikhathi eside kakhulu, eziphephile, ezomnotho nezinobungani obutholakalayo kulezi zinsuku.
I-Alucosun SOLID ® ihlukaniswa njenge-Class A1 Fire Resistant façade evivinywe i-EN13501 nokuqina kwayo okubangelwa izakhiwo ze-PVDF ezinemibala ehlukahlukene futhi iqeda amasudi ezinhlobonhlobo zezicelo.
Incazelo Ibanga Okujwayelekile
Ukujiya kwephaneli 2-5mm 2mm, 3mm
Ububanzi 1000-1500mm 1250mm, 1500mm
Ubude 1000-5800mm 2440mm, 3050mm, 3200mm
Ingxubevange Uhlobo I-AA 1000, AA 3003, i-AA 5052 I-AA 1100, AA 3003
Isisindo 8.2kg / m2 okwe-3mm
Ububanzi (mm) 0 kuye ku -0.4mm
Ubude (mm) ± 3mm
Ubukhulu (mm) ± 0.2mm
Umehluko Womugqa Ovundlile (mm) Mm5mm
Ukuqina Kwe-Edge (mm Mm1mm
Izakhiwo Zomshini Nezomzimba
I-Tensile Ultimate I-185 MPa
Ukuqina Okuqinile I-165 MPa
Ukunwebeka @ Break 1-4%
I-Modulus ye-Elasticity I-68.9 GPa
USheya Modulus 25 I-GPa
Shear Amandla I-110 MPa
Ukuqhuba Okushisayo 154 W / mk
Indawo yokuncibilika 643 - 654 C
Ukushisa kwe-Annealing 413 C
Amandla adonsela phansi athile 2.73 G / C.
Ukumboza Okuqinile kwe-Aluminium Pvdf
S. Cha Amapharamitha Iyunithi Izinga Lokuhlola Umphumela
1 Esinemthombo Uhlobo - - I-PVDF esekwe nge-fluorocarbon enamathela ku-15-20
2 Esinemthombo iwaranti - - 15-20 iminyaka
3 I-Gloss @ 60 degree % I-ASTM D 523 20-80
4 Ukuzinza (T-bend) T I-ASTM D1737-62 2T, akukho ukuqhekeka
5 Ukubuyela emuva komthelela- ukweqa - I-NCCA II-5 Akukho ukukhetha
6 Ukuqina-ipensela ubuncane I-ASTM D3363 Ubuncane
7 Adhesion Amanzi Abilayo Amanzi Amanzi Abilayo - I-ASTM D3359, indlela 8 37.8 ° C, amahora angu-24. 100 ° C, imizuzu engu-20. Akukho ukukhetha ngaphandle kokukhetha Akukho ukukhetha
8 Ukumelana nolaka amalitha / mil I-ASTM D968-93 (Isihlabathi esiwayo) 40
9 Ukumelana Namakhemikhali - I-ASTM D1308-87 ASTM D1308-87 ASTM D1308-87 AAMA2605 ASTM D2248-93 Alukho ushintsho
I-10% HCL (Ukuhlolwa Kwemizuzu eyi-15)
20% H2SO4 72 Amahora
20% NaOH 18 Amahora
Mortar Pat test Amahora angu-24
Umuthi wokugeza, isisombululo esingu-3%, i-38ºC, i-72hrs
10 Isimo sezulu-o-imitha test - UMax. Amayunithi ama-5 ngemuva kweminyaka eyi-10
Ukugcinwa kombala I-ASTM D2244-93 Min 50% ngemuva kweminyaka eyi-10
Ukugcina isicwebezelisi I-ASTM D523-89 UMax. Amayunithi ayi-8 wemibala no-6 we
Ukumelana ne-chalk Mhlophe ngemuva kweminyaka eyi-10
11 Usawoti spray ukumelana Amahora I-ASTM B117-90 IBlister-10, umbhali-8, ngemuva kuka-4000
amahora, 35 ° C inkungu kasawoti
12 Ukumelana nomswakama Amahora I-ASTM D2247-94 Awekho amabhamuza Ngemuva kwamahora angama-4000, i-100% RH, i-38 ° C
I-Alucosun SOLID® ihlolwe ngokuya nge-EN13501 ifakwa esigabeni A1 okungumkhiqizo ongashisi ngokoqobo. Ngokuhambisana nekhodi yokuphepha yempilo yeNFPA kanye neziphathimandla zokulawula ezahlukahlukene okungavuthwa kuvunyelwe kulo lonke uhlobo lwesakhiwo ngaphandle komkhawulo. Mayelana nalokhu, i-AlucosunSOLID ®nge-class A1 ingafakwa ezakhiweni zanoma yikuphi ukuphakama nohlobo.
Into yokuhlola Umphumela
EN13501-1 Isigaba A1
I-Aluminium ibhekwa njengensimbi yezimboni esebenza kabusha kakhulu; kukhululekile ekugugulekeni kwensimbi enzima. I-Aluminium ingavuselelwa kabusha ngaphandle kokwehluka kwekhwalithi. I-aluminium esetshenzisiwe ayihlukaniswa ne-virgin virgin, inqubo ayivezi noma yiluphi ushintsho ensimbi, ngakho-ke i-aluminium ingavuselelwa kabusha unomphela. Ukwenza kabusha i-aluminium konga ama-95% wezindleko zamandla okucubungula i-aluminium entsha.
Izingulube ezisetshenziswe ohlelweni lokupenda ngesikhathi sokukhiqizwa kwe-Alucosun Solid ®akuyona ingozi. Ngenkathi ukumbozwa kwamapaneli aqinile Soloku ubuchwepheshe obusetshenziselwa ukucubungula okuvumela ukuthi izixazululi ezikhishwe kupende ziyashiswa bese ziphakelwa emuva enqubeni.
I-Alucosun SOLID®indawo iqediwe nge-PVDF kanye nohlelo lokupenda lweNano kwinqubo eqhubekayo yokumboza ikhoyili eqinisekisa ikhwalithi nokuvumelana ngokuhambisana nemininingwane ye-AAMA 2605. Imibala eqinile imvamisa izembatho ezimbili (26 +/- 1 µm) ngenkathi insimbi iyizingubo ezintathu (3) (32 +/- 1 µm).
Isistimu yepende enenani eliphansi lama-70% PVDF resin yaziwa ngokumelana nemisebe ye-UV nemiphumela yezemvelo, ngakho-ke i-Alucosun SOLID ® ukusebenza okuhlala njalo nokungaguquguquki ezimweni zezulu ezimbi kakhulu.
Isistimu inikeza i-topcoat eyengeziwe ecacile enezinhlayiya ze-Nano ezixhumene kakhulu ekugcineni kwe-PVDF; okuqinisekisa indawo ebushelelezi. Indawo ebushelelezi necacile yenza ukungcola nothuli kube nzima ukunamathela okunikeza isakhiwo ukubukeka okuhlanzekile ngaso sonke isikhathi. INano PVDF wuhlelo lokupenda lokuzihlanza.
Izinhlelo zepende ziqinisekisa kakhulu iminyaka eyi-15-20 yewaranti yokuqeda.
Amaphaneli anezinketho ezahlukahlukene zokuqeda ayatholakala ku-Alucosun SOLID ® kepha kuncike ekukhawulweni kwesikhathi esithile nosayizi. Ngokwemvelo kuvikelwe ungqimba lwe-anodized SOLID panel kungukuqina okuqinile kokuqina kokuqala kunikeza iwaranti cishe Iminyaka engama-30.
Zonke izindlela ezijwayelekile nezanamuhla zokufakwa kwama-facade zingasetshenziswa ekufakweni kwamapaneli aqinile. Enye inketho yokulungiswa okufihliwe kuyenza yehluke kumikhiqizo yokuhlanganisa ehlanganisiwe. Noma imuphi umumo we-concave, i-convex, ikona, ukumbozwa kwekholomu, ama-softs, i-canopy njll kungenziwa kalula futhi kufakwe. Ukuze uthole ukunwetshwa okufanayo okushisayo kunconywa ukusebenzisa isakhiwo esincanyana esenziwe nge-Aluminium. Kunconywa ukuthi kusetshenziswe amaphaneli kusuka ekusetshenzisweni okukodwa kanye nesiqondiso sokulungisa umfaniswano sokuqeda okuhle kakhulu.
I-Alucosun SOLID® ikhiqizwa ngendwangu emincane ye-lacquer ohlangothini lwangemuva ukuqinisekisa ukubopha okuqinile nezinamathiselo ngakho-ke ingaxhunywa ngqo kwisakhiwo ngaphandle kwanoma iyiphi into ebonakalayo yokulungisa.
Amapaneli wobukhulu obungu-3 mm nangaphezulu aphephile ukuwelda (i-ISO 14555: 2017) enama-stud bolts ngemuva kwephaneli yokulungiswa okucashile. I-alloy 3003 ne-5005 esetshenziselwa amaphaneli ilungele inhloso yokushisela. Ukushisela ohlangothini lwangemuva lwamaPhaneli ngo-3 mm nangaphezulu ngeke kube nomthelela endaweni eqediwe.
I-Alucosun ® ibhizinisi le-Wis om Metal Composites Ltd lokuthi i-brin gs ikhiqize imikhiqizo ephezulu ngokubambisana nendawo yethu yokukhiqiza eyaziwayo ebanjelwe e-Jiangsu, ishukumisa cishe ama-ades amabili wesipiliyoni solwazi olucebile ku-Aluminium Panel Industry.
I-Alucosun ®umkhiqizo onakekela zonke izidingo zephaneli yakho yokwakha, noma ngabe yiFacade, Roof, Ceiling, Advertising, Corporate Identity. Ifakwe zonke izinto ezisendlini ukuqinisekisa umkhiqizo wekhwalithi nokuzibophezela kokulethwa.
Sinikeza imikhiqizo ehamba phambili nge-ultim a teperfection; kufinyelelwe ngenhlanganisela ekahle yochwepheshe bemboni, ubuchwepheshe bamuva nemishini eyindida.
Isikhungo esakhiwe ukukhiqiza ngaphezulu kwe-10 Million M2 ngonyaka, nezitshalo ezintathu (3) zokukhiqizwa okuhlukahlukene kwePaneli, i-Colour Coating kanye neLaboratory yangaphakathi neNdlu ehlome kahle.
I-Alucosun ®isebenza kuyo yonke iMpumalanga Ekude, eMpumalanga Ephakathi, eYurophu naseMelika. Amahhovisi ethu ezifunda, osomabhizinisi, amanxusa kanye nabasabalalisi kuso sonke isifunda asenza sikwazi ukuhlangabezana nezidingo zakho zezinto zokwakha kanye nezinsizakalo zokuxhasa noma ikuphi lapho ukudinga khona.
Langaphambilini I-Alucosun PE
Iphaneli eliqinile le-2mm Aluminium
Iphaneli eqinile ye-Aluminium
Solid Metal Fence Iphaneli
I-ALUMINUM COMPOSITE PANEL (YOPHAWU)
I-ALUMINUM COMPOSITE PANEL